AZA MANAO ADALADALA - Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara
Centre Timoty Mahatsara
Edisiona Vaovao Mahafaly
Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara
Studio Vaovao Mahafaly
AZA MANAO ADALADALA
Hatramin’ny andro nanotan’ireo olombelona voalohany ka mandrak’ankehitriny dia tsy mitsahatra mitombo ny faharatsiana. Ampy anaporofoana izany ny famakina ireo […]
Hatramin’ny andro nanotan’ireo olombelona voalohany ka mandrak’ankehitriny dia tsy mitsahatra mitombo ny faharatsiana. Ampy anaporofoana izany ny famakina ireo lohatenin-gazety mivoaka isanandro. Raha « ratsy » toy izany izao vanim-potoana izao, dia inona no fahendrena ho an’ny mpino ? Zavatra roa mifameno no voalazan’ireo andininy ireo :
1- Aza misary adala fa mbà hendry. Ny misary adala dia ireo mahalàla tsara ny toeran’ny zanak’Andriamanitra misy azy kanefa tsy mandeha tahaka ny zanaky ny mazava araka izay iantsoan’Andriamanitra azy fa « milalao ota» (Efe.5 :1-14).
2- Hararaoty ny fotoana. Ny fanaovana adaladala dia soloy famantarana ny sitrapon’Andriamanitra ary ny fimamoana divay soloy fifenoana ny Fanahy Masina mba hahaizantsika mitondra tena tsara ho voninahitry ny Tompo (Efe.5 :17-21).
Ho tonom-bavaka fanaontsika amin’izao fiandohan’ny taona izao anie ny fivavak’I Mosesy hoe :
« Ampianaro hanisa tsara ny andronay izahay, mba hahazoanay fo hendry. »
— (Salamo 90 :12)
Ny fanambarany ny Tenany amintsika
Lot II L 10 Bis Ankadivato
Tel.: 00 261 (0) 34 98 506 09
Email : Hifandray amin’ny Mailaka
Verset principale et Web Radio
« … Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Izy »
© 2021 Tranokala ofisialin'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara